Accommodation in Parow North | JR Accommodation
"Olona khetho lwakho lokutya olungileyo eKapa"
14 Iiyunithi zokuzihlaziya
Yilwe ngokufanelekileyo, iiyunithi ezixhotyiswe kakuhle apho iyunithi nganye ihlolwa khona ngaphambi kwendawo yokuhlala ukuze kuqinisekiswe ukuhlala okusemgangathweni.
Cwangcisa ukutyelela eKapa? Kwindawo yokuhlala iJR sinokuhlala amaqela anabantu abangama-92.
Igumbi elinye lokulala
Igumbi lokulala amabini
Jonga Zonke iiYunithi
Olympia One Bedroom units
Sinezindlu ezi-5 kwigumbi elinye eOlimpiki. Yilwe kakuhle, ixhotyiswe ngokufanelekileyo kwaye igcinwe kakuhle
Ubhedu enye yeekumkani
Iibhedi ezimbini ezizodwa
Igumbi lokuhlambela lokuhlambela
Ixabiso ngobusuku ngabunye
Olympia Two Bedroom units
Sinezindlu eziyi-8 ezinamagumbi okulala amabini eOlympia.
Yilwe kakuhle, ixhotyiswe ngokufanelekileyo kwaye igcinwe kakuhle
Iibhedi ezine ezizodwa
Sinegumbi elinye lokulala elinendawo yokuhlala eParow North, eKapa
Igumbi lokulala elinobungakanani beKing okanye iibhedi ezimbini ezizodwa
UKUTYA & DLULA
Zonke izidlo ziyafumaneka xa uceliwe.
Ikofu, iti, Amanzi kunye neziselo ezizisiweyo
I-Continental, isiNgesi, iVegan kunye nePork
Isidlo sakusasa seMihla ngemihla
Ikhofi eyongezelelweyo, iti, ubisi, ijusi kunye neebhiskiti
Ipitsa, ipasta, naliphi na ikhaya eliphekiweyo kukuthanda kwakho
Veza zonke izinto ezili-14
Parow North, eKapa, eNtshona Kapa.
Zonke iiyunithi zethu zibekwe kwindawo ephakathi kwindawo ephantsi kwezitrato ezikufutshane nomgaqo wendlela uN1, zibonelela ngokulula kwezi ndawo zilandelayo:
V&A Indawo yokuBeka amanzi kunye neSixeko-i-18km
Ukuhamba ngeCanal Mall / kwiSixeko sekhulu leminyaka - 7km
I-Grand West yekhasino-8km
I-20min kude kumhlaba weNtshona Wine
I-10min ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseKapa
Ngaphakathi kukuhamba umgama (500m okanye ngaphantsi) kwiinkundla zeTennis kunye neePaki zeTrans / Trim.
Izibhedlele ezintlanu ezaziwayo zizo zonke ngaphakathi kwe-10min drive: IPanorama Medi-Clinic; ULouis Leypoldt; ITygerberg (iLizwe); Karl Bremer (State) kunye neNetcare N1 City
Uya kucelwa ukuba uvumelane nale mithetho ingezantsi xa usenza ubhukisho.
Ngena ngo- 14: 00 pm -Ukungena kwangoko ukuze ucwangciswe kusengaphambili
Jonga ukuphuma kwe- 10: 00 kusasa- Ngokungqongqo
Xa usenza ubhukisho, kufuneka oku kulandelayo:
sifuna idipozithi engama-50% ngeentsuku ezi-3 .
Isazisi kunye ne-R600 yedipozithi yokuqhekeza imali xa ufika. Ukusilela ukubonelela nge-ID kunye nedipozithi yokwaphuka kuyaphumela ekucimeni .
Konke ukubhukisha kuya kuhlawulwa ngokupheleleyo ekufikeni ngaphandle kokuba kulungiselelwe abaphathi
Iiakhawunti mazilungiswe ngaphambi komhla we-10 kusasa.
Akukho ntlawulo yamakhadi eManyeneyo okanye amakhadi e-American Express.
Siyahlawula ngeyunithi kwaye asingomntu ngamnye.
Rhoxisa phakathi kwe-15 ukuya kwiintsuku ezingama-21 ngaphambi kokungena kwaye ufumane imbuyekezo engama-50%, ukhuphe intlawulo yolawulo.
Iipesenti ezingama-50 ukubuyiselwa kwemali, thabatha umrhumo wolawulo.
I-25% yokubuyiselwa kwemali, thabatha umrhumo wolawulo.
Iintsuku ezingama-21 ukuya kweli-15 ngaphambi kokungena
Iintsuku ezili-14 ukuya kwezi-8 ngaphambi kokungena
Iintsuku ezisi-7 phambi kokungena
Umrhumo we-10% wolawulo uza kuncitshiswa kwifom yonke yokupheliswa
Iintsuku ezingama-0 ukuya kwezi-7 phambi kokungena kwi-100% yedipozithi ebhatelweyo
Iintsuku ezisi-8 ukuya kweli-14 ngaphambi kokungena kokuphulukana ne-75% yedipozithi ebhatelweyo
I-15 ukuya kwengama-21 ngaphambi kweentsuku zokungena kuhlawulwe iipesenti ezingama-50 ezihlawulwe
Ukufudumeza kwentliziyo, iindawo zokuhlala ezizenzele ezifanelekileyo eParow North, eKapa
IKapa yenye yezona ndawo zintle zokuba namava okuhamba angalibaleki. Akukhe kube kudala kakhulu ukwenza iinkumbulo ezintsha!
Isixeko sinikezela yonke into ukusuka kwindawo yokutya edumileyo yokutya kwilori ukuya kwiivenkile zokudlela ezi-5. Ngalo lonke ixesha uthatha ubuhle obungenakuthelekiswa nanto - nokuba yeyonaNtaba yeTafile entle kangaka, imemelela iCape Winelands okanye naluphi na unxweme lwethu oluhle.
"Olona khetho lwakho ulungileyo kwindawo yokuhlala i-Parow North, eKapa"
Onke amaqela-, iiholide-, iiholide-, ezorhwebo- kunye nokuhlala- zihlala-nje kwamkelekile!
Sili shishini elincinci lasekhaya kwaye ke ngoko siyazingca ngokuqinisekisa ukuba zonke iindwendwe zethu ziyoneliseka nge-100% ngexesha lokuhlala kwazo. Sizabalazela ukubeka iimfuno zabathengi bethu kuqala ngokuqinisekisa ukuba inkonzo yethu ikhawuleza kwaye isebenza ngokufanelekileyo. Kusinika uvuyo olukhulu kunye nolonwabo sazi ukuba sinika iindwendwe zethu zonke ekhaya kude nekhaya.
Apha kwindawo yokuhlala iJR siyaqhubeka nokwakha ishishini lethu kwisiseko esomeleleyo sezinto ezisisiseko esabiweyo- lonke unxibelelwano kunye nokuDilizwa kuxhaswa nguHloniphelo oluManyeneyo, ukuKhokelwa nguMzekelo, kunye "nalowo ufundisayo ngamnye" njengoko sikholelwa ekukhuleni amandla abantu bethu, ukukhankanya kodwa abambalwa.
Indawo yokuhlala i-JR yasungulwa ngo-2010 yayigumbi elinye elinamagumbi amabini okulala, namhlanje sinebhongo ngeeVenkile eziyi-13 (iOlymipa); Indlu yeendwendwe enezindlu ezi-2 ezahlukeneyo kunye neGumbi-ngakwichibi (iDe Grendel); kunye neGadi yeGadi.
Sithobekile kwaye sinombulelo ongazenzisiyo kubathengi bethu ngamnye osincedileyo kwisithuba sonyaka - ngaphandle kwakho akukho nanye inokwenzeka.
Enkosi ngokuqhakamshelana nathi! Sizonxibelelana kungekudala.